Iikholeji zoBugcisa boLuntu boLuntu: I-SAT Score & ACT Imisebenzi
Kubafundi nabazali Uvavanyo lweKholeji
I-SAT kunye neMITHETHO I-Scores yoKwamkelwa kwiiKholeji zoBugcisa boLuntu obuPhambili
Uthelekiso lwe-SAT kunye noMthetho WOMTHETHO weeKholeji zobuGcisa boLuntu obuPhezulu
Ukuba ucinga ngophando oluphezulu loluntu lwekholeji, ubuya kufuna iimpawu ze-SAT okanye izikolo ze-ACT ezingenani ubuncinane kumyinge ongentla. Itafile ezingezantsi zinokukunceda ubone ukuba uthelekisa njani nabanye abafake izicelo. Uza kubona ukuba iKholeji eNew yaseFlorida, i-Honors College yaseFlorida kwinkqubo yeyunivesithi yoluntu, inezona zihambeli ezikhethiweyo. Izicatshulwa zingezantsi zibonisa izikolo ze-SAT kunye ne-ACT amanqaku aphakathi kwabafundi abangama-50% ababhalise kule kholeji yobugcisa be-liberal ephakamileyo evela kwilizwe lonke.
Ukuba amanqaku akho akwii-ranges (okanye ngaphezulu kweendlela), ujoliswe ekujoliseni esikolweni.
Iikholeji zoBugcisa boLuntu oluPhambili kwi-Colleges SAT Score Ukuthelekiswa (phakathi kwama-50%)
SAT izikolo I-GPA-SAT-ACT
College of Charleston 500 600 500 590 - - ubone igrafu
Ikholeji yaseNew Jersey 540 640 560 660 - - ubone igrafu
Ikholeji entsha yaseFlorida 600 700 540 650 - - ubone igrafu
Ikholeji yaseRamapo 480 590 490 600 - - ubone igrafu
ISt. Mary's College yaseMaldin 510 640 490 610 - - ubone igrafu
SUNY Geneseo 540 650 550 650 - - ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseTuruman State 550 680 520 650 - - ubone igrafu
KwiYunivesithi kaMary Washington 510 620 500 590 - - ubone igrafu
Yunivesithi yaseMinnesota-Morris 490 580 530 690 - - ubone igrafu
UNC Asheville 530 640 510 610 - - ubone igrafu
Funda ukuba zeziphi iinombolo ze-SAT ezithethayo
Ukuba ucofa kwi "graf" ukudibanisa ngakwesokudla kwimiqolo nganye, uya kufumana isikhokelo esibonakalayo esilungeleyo samabakala kunye namanqaku avavanyo olulinganisiweyo lwabafundi abamkelweyo, bafunyanwe, kwaye bahloliselwe esikolweni ngasinye.
Unokufumanisa ukuba abafundi abathile abanamabanga aphezulu babhalisiwe okanye banqatshelwe esikolweni, kunye / okanye ukuba abafundi abanamanani aphantsi (ngaphantsi kwamabala adweliswe apha) avunyelwe. Oku kungenxa yokuba zonke iikholeji zinenkqubo yokwamkelwa ngokupheleleyo.
Zonke ezilishumi kwezi kholeji ziya kwamkela izikolo ze-SAT okanye izikolo ze-ACT, ngoko zikhulule ukuhambisa iinombolo ukusuka kwisikolo sakho esihle.
Ngezantsi inguqu yomThetho wetafile:
Iikholeji zoBugcisa boLuntu oPhezulu oPhezulu loLuntu UMTHETHO Wamaqaku Ukulinganisa
Udidi IsiNgesi IMathematika
College of Charleston 22 27 22 28 20 26
Ikholeji yaseNew Jersey 25 30 25 29 - -
Ikholeji entsha yaseFlorida 26 31 25 33 24 28
Ikholeji yaseRamapo 21 26 20 26 20 26
ISt. Mary's College yaseMaldin 23 29 22 28 22 30
SUNY Geneseo 25 29 - - - -
KwiYunivesithi yaseTuruman State 24 30 24 32 23 28
KwiYunivesithi kaMary Washington 22 27 21 28 21 26
Yunivesithi yaseMinnesota-Morris 22 28 21 28 22 27
Funda ukuba zeziphi iinombolo zomThetho
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba amanqaku ovavanyo olulinganisiweyo ayingxenye enye yekholeji yakho yesicelo. Amanqaku apheleleyo awaqinisekisi ukuba kwamkelwa ukuba ezinye iinxalenye zesicelo sakho zibuthathaka, kwaye amanqaku angaphantsi-anemfuneko akudingeki ukuba kube sekupheleni kwamaphulo akho ekolishi. Ekubeni ezi zikolo zenza i-admissions ephelele, izikhulu zamagosa ezamkelwayo ziya kufuna ukubona irekhodi eliqinileyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi yentshukumo ecacileyo kunye neencwadana ezilungileyo zokucebisa .
Olunye ucebiso olubalulekileyo lokugcina engqondweni kukuba ekubeni ezi zikolo zixhaswa ngemali, abafaki-zicelo bezizwe bangadinga amanqaku aphezulu kunezi zigaba. Izikolo zivame ukukhetha abafaki-zicelo belizwe.
Iinkcukacha ezivela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zezeMfundo
Yiyiphi ibakala leMatriki eliPhezulu leMatriki?
UMgangatho weMigangatho Ukuqhathaniswa kokungeniswa kwiiKholeji zaseLouaana
I-SAT izikolo zokungeniswa kwiiNyuvesi ze-Horizon League
UMTHETHO Ulinganisa ukungeniswa kwiIyunivesithi ze-Big Sky Conference
Yiyiphi i-Good Biology SAT yesiGaba soVavanyo loMxholo ngo-2018?
UMgangatho weMigangatho Ukuqhathaniswa nokwamkelwa kwiiKholeji zeAnsansas
I-SAT Amanqaku okuthelekiswa kwamkelwa kwiiKholeji zaseHawaii
UMgangatho weMigangatho Ukuqhathaniswa nokwamkelwa kwiiKholeji zaseArizona
I-SAT Izikolo zokungena kwiiKholeji zaseVilginia zaseNtshonalanga zonyaka
I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa kwiikholeji zase-Washington DC
I-EssayEdge I-Admissions Essay Editing Service
Ukuqonda i-Journalism yeSizwe
I-Thinker, Umsizi, uMkhosini, u-Spy: Ngubani owayeyinyani uHercules Mulligan?
Umthetho wesi-2, Isiqendu 3 se-'Umhlanjesi eLangeni '
Abadlali beGoli kunye neNinzi kakhulu kwiiNtloko zeMadoda
Uluhlu lweMbali yeeVangeli zeLizwe eliMnandi
I-Mood Ring Imibala kunye ne-Mood Ring
Isikhokelo se-Insider kwiNFL Inkqubo yoHlelo oluNgezelelweyo
Imithetho yoqobo yaseGoli
Liyiphi iVenzi yokuTshintsha?
Iingcamango zeProjekthi yeZenzulul
Yintoni Imbali Yosuku Lwezilwanyana?
Umboniso wokuQala wokuPhankanya - 1874
Ukuhlaziywa kweNcwadi ethi "Abaninzi ubomi, abaMasters abaninzi" nguDkt. Brian Weiss
Babengubani I-Gisaeng yaseKorea?
Ngubani owafaka iStreenscreen?
Iingcebiso, izihloko, kunye nemiSebenzi yeveki enye yesiNgesi 101
I-Admission yeYunivesithi yaseName Dame de Namur
Imifanekiso ka-2006 iDodge Ram 3500 Quad Cab
Uthini Umbala Wokugqithisa?